Xukumadda Somaliland Oo Qaramaynaysa Ciidan Kasoo Goostay Maamulka Puntland Oo Ku Sugan Bariga Sanaag |
Xukumadda Somaliland Oo Qaramaynaysa Ciidan Kasoo Goostay Maamulka Puntland Oo Ku Sugan Bariga Sanaag
Hargeysa(GNN) june.11,2016-Xukumadda Somaliland ayaa la sheegay inay wada hadal toos la furtay ciidan xoogan oo kasoo goostay maamulka puntland oo tiradooda lagu qiyaasay 17 askari oo wata sida la sheegay 7 gaadhi oo tikniko ah iyo hub culus oo ciidanku wataan.
Ciidankan oo in badan ka mid ahaa mamulk puntland aay horaantii bishan so gaadhay deegaank Buuraan ee bariga sanaag,halkas oo ay fadhiisin ka samaysteen.
Waxaana ciidanka hogaminaya sarkaal lagu magacaabo Gen Muuse,waxaana wararku tibaaxayaan in xukumadda Somaliland ay wada hadla la furtay sarkaalka wata ciidankan oo sida wararku nagu soo gaadhayan maamulka puntland u cadeeyey inaanu dib ugu noqonayn.
Masuuliyiinta deegaanka Buuraan aya wargeyska saxansaxo u xaqiijiyay in ciidamadaaasi ay wali ku sugan yihiin meel u dhaw deegaanka Buuraan halkas oo ay fadhiisin ka samaysteen,balse taliyaha ciidankaasi wataa uu soo gaadhay magaalada ceerigaabo isag oo dhawaan wasiiro ka socda maamulka puntland oo u socday ergo ahan u sheegay inaanu ku noqonayn maamulkaas.
Ilaaa hada lama garanayo halka uu marayo wada hadaladii u socday xukumadda Somaliland iyo sarkaalka watay ciidanka, balse xukuumadda somaliland ayaa la filayaaa inay sida ugu dhakhsaha badan u qaramayso ciidamadan.